कोरोना भाइरसको आतङ्कले इतिहाँसमै पहिलोपटक नेपालमा अनौठो घट्ना : इच्छाहरु पनि बदलिए, क्षणभर छोड्न तयार ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कोरोना भाइरसको आतङ्कले इतिहाँसमै पहिलोपटक नेपालमा अनौठो घट्ना : इच्छाहरु पनि बदलिए, क्षणभर छोड्न तयार !
समय बदलिएको छ । मानव सोच, अवधारणा र इच्छाहरु पनि बदलिएका छन् । हिजो शहर जान चाहने मानिस आज त्यही शहर क्षणभर छोड्न तयार छन् । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसका कारण जारी भएको लकडाउनले शहरमा बस्ने धेरैको गाँस, बास र कपास खोसिएको छ । आयआर्जनको अवसर प्राप्तिको थलो ठानेर शहर पसेकालाई अहिले यसबाट निकै सास्ती भएको छ ।
लकडाउनले हिजो युरोप, अमेरिका आकर्षित हुने मानव सोच आज विकर्षित भएको छ । अकालमा निधन अति विकसित देशमा पनि हुँदोरहेछ भन्ने बुझाइ भएको छ । सम्पन्नताले मात्र मानव जीवन सुरक्षित हुन्नरहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स, स्पेन, अष्ट्रेलिया, फिलीपिन्स पुगेका नेपालीहरु आफ्नो मातृभूमि आउन आतुर छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश : ५ लिटर र’क्सी, १० लिटर जाँ’ड बनाउन दिनू
अब सरिता गिरीले सांसदको पद छाड्नुपर्छ : कमल थापा
‘नेपाली सेनाले भारतको हेलिकप्टर ख’सालेर पाइलट क’ब्जामा लियो’ भन्दै भारतमा रुवाबासी